Banyere Anyị - Huizhou Kaiwansi Electronic Technology CO., LTD.
Igwe olu ntị
Huizhou kaiwansi Electronic Technology CO., LTDemi odude ke Huizhou City, Guangdong Province. Limited bụ ọkachamara ọkachamara na-enweghị eriri igwe ikuku, na-etinye uche na isi R&D, mmepụta na ahịa karịrị afọ 9.
Ngwaahịa ndị bụ isi gụnyere neckband, headband na Tws earphone. Anyị factory nwere ebe karịrị 3,000 square mita na ihe karịrị 200 ndị ọrụ na 4 tozuru okè mmepụta e. Ka ọ dị ugbu a, ikike imepụta ihe karịrị ngalaba 200,000 kwa ọnwa ma ebufeela ngwaahịa ndị a karịa mba 150 na mpaghara. Na mgbakwunye, ngwaahịa anyị enweela nnukwu ekele na ahịa dị iche iche gburugburu ụwa. Anyị na-akwado akara ngosi omenala na ngwaahịa ahụ.
We nwere ihe nnwale dị elu, ngwa ọrụ na usoro njikwa iji hụ ngwaahịa dị elu. Ihe niile anyị nwere na-agbasosi ike na ISO9001: 2015 Ogo Control Systems.
Ebe ọ bụ na e guzobere na 2010, KAIWANSI na-arara onwe ya nye na imepụta ngwaahịa, ịchịkwa mma yana ọrụ ndị ahịa, nke na-aza ngwa ngwa ma rute ndị ahịa afọ ojuju. Site na mgbalị na-aga n'ihu, KAIWANSI mara ndị ahịa maka imepụta ngwaahịa dị elu. Na na ọkachamara R & D ngalaba, KAIWANSI na-aga n'ihu mmepe nke elu àgwà, otutu ngwaahịa na-ezute ahịa ina. Company'skpụrụ ụlọ ọrụ anyị bụ ụkpụrụ ọhụrụ, ịdị n'otu, ịdị ike na ịrụsi ọrụ ike. Onye ọ bụla nọ ebe a nwere ike ime ka ikike nke onwe ha bulie ogo ụlọ ọrụ ha.
Tna mmekorita ahia na ulo oru ahia, anyi na enye OEM & ODM oru nye otutu ndi ahia n’oge gara aga. Na July, 2019, iji gbasaa INDIA NA EURO azụmaahịa na ịmatakwu banyere ahịa, KAIWANSI eguzobewo ngalaba nke aka ya na mba ofesi, ka ọ dị ugbu a, KAIWANSI mepụtara akara aka ya ... Ọganiihu anyị abụghị naanị site n'elu nchegbu dị mma, mana site na ntụkwasị obi na nkwado ndị ahịa. Ma merie ezigbo aha na aha ọma na ahịa mba ụwa ma nweta ezigbo aha na usoro nke imekọ ihe ọnụ Aro na njikarịcha ngwaahịa. Anyị ji obi anyị na-anabata gị ka ị na-esi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma na-achọ ogologo oge nkwado.